Mhedzisiro yekukanganisika kwe cortical stroke muhudiki pane hunyanzvi hwekuziva uye kudzidza kwechikoro - Kudzidziswa kweChunhu
Izvo zvinokanganisa zvecortical stroke muzera rekukura pane ruzivo rwekuziva uye kudzidza kwechikoro
Iwe uripano: musha » Articles » Izvo zvinokanganisa zvecortical stroke muzera rekukura pane ruzivo rwekuziva uye kudzidza kwechikoro
Kunyangwe ichimiririra yakakosha chikonzero chekukuvara kwehuropi pakati pevechidiki, kurohwa kwevacheche hakuna kudzidza zvakanyanya. Sezvo zvisingawanzo kuitika, zvishoma zvinozivikanwa nezvekuti kurohwa kunobata sei neurocognitive development.
Kare taitaura nezveimwe kutsvaka inoitiswa naChampigny uye vanobata pamwe; mune ino ongororo, zvakaonekwa kuti vanopukunyuka sitiroko vanosangana nematambudziko ezvidzidzo kudarika vezera ravo, pamwe nekuda kwekurema kwekuziva. Izvi ndizvo zvakabuda kunyangwe mamakisi echikoro aive akafanana nevezera, nekudaro ichiratidzira kudikanwa kwekuwongorora kwakadzama-mukati kuti uongorore matambudziko anogona kusangana nevarwere.
Imwe fundo yakaitwa naPeterson nevamwe vavanoshanda navo yakanangana neyevana avo vanga vajekesa cortical stroke - chikamu cheuropi chakabatanidzwa mukukwirira-kwechiitiko chekuziva.
Tsvagiridzo iyi yaisanganisira vana makumi mana nevairi vane dambudziko iri, vachiongorora zvinhu zvakawanda senge kureba uye nzvimbo yemaronda, pamwe nezera rechiitiko.
Vatsvakurudzi vakanyora kuti vazhinji vevana vakagamuchira imwe mhando yekuongororwa kwepfungwa, senge ADHD, kuremara pakudzidza, kusagadzikana uye kusagadzikana kwepfungwa, kana mutauro Muchokwadi, izvi zvinogona kunge zvisingawanzoitika, sezvatotaurwa mu chinyorwa chapfuura.
Pamusoro pebasa rekuziva, vana vakapasa zvakaderera kupfuura avhareji mune bvunzo dze kushanda ndangariro e kugadzirisa kumhanya - zvakare izvi zvato kuwanikwa mukati research yakambokurukurwa.
Kutendeuka pachinzvimbo chedzidzo kuitisa, kwakanyanya kukosha matambudziko anotarisana nawo kukarukureta, nepo zvimwe kudzidza zvine chekuita nekuverenga, mutauro uye hunyanzvi hwekugadzirisa zvinetso zvaiwanzova mukati memiganhu.
Zvakare, bvunzo-dzechokwadi dzakatariswa dzakaiswa mukati mezvakajairwa asi uwandu muzviyedzo zvaive zvakaderera mota kubatira.
Iwe unogona zvakare kufarira: Kuregeredza: iro rima renyika
Zvimwe zvinhu zvakawanda zvakaongororwa kuburikidza nemibvunzo yakazadzwa nevabereki vevarwere, izvo zvakaratidza matambudziko mukushanda mundangariro kana mukugona kuronga nekuronga, pamwe nekutanga uye kuongorora mumabasa anozoitwa. Chero zvazvingaitika, iyo yekupedzisira data inofanirwa kutariswa nekuchenjerera nekuti ivo vanowana kubva mune zvakanyanya subjective kuongororwa pane kuedza kwekuita.
Ndichiziva nezve kushoma kwemuenzaniso, vanyori vakaita zvimwe ongororo mukuyedza kuona kana chimwe chinhu munhoroondo yemhuri chingabatsira kufanotaura kushomeka kwekuziva. Ivo vakacherekedza kuti kurohwa kwakaitika pazera rekutanga kwakaratidza kutapudzika kukuru pakufunga kwekufambiswa pamwe nekufambiswa kwemotokari, nepo sitiroko pazera "rakura" rakakanganisika pamusoro penzvimbo yese yekuverenga.
Kunyange zvimwe zviratidzo zvakaita seLionion uye nenzvimbo zvainge zvisina kufanota maficha, ivo vaongorori vakawona kuti inosvika mazana manomwe neshanu muzana ezvakaderera-matsi aive nepakati kusvika kune makuru maronda, kazhinji kurudyi uye kusanganisa nechemberi lobe.
Cherechedzo inonakidza yakaitwa nevanyori ndeyekuti dzidzo yepamusoro yekubatira inoenderana nehunyanzvi hwekutaura hwemashoko muvana, pamwe nehuwandu hwepamusoro hwehungwaru, kuverenga kwemazwi uye kunzwisisa kwemutauro.
Peterson nevamwe vake vakagumisa kuti vana vazhinji vakatambura nechirwere checortical vanowana, zvakajairika, cognitive test scores zvinoenderana nezvinotarisirwa zera ravo. Nekudaro, pane kusakwana kwakanaka kwekushanda mundangariro, kugadzirisa nekumhanyisa kana kuwirirana (iyo yekupedzisira, kazhinji inogona, semhedzisiro yekusagadzikana mukushandiswa kweruoko rukuru).
Zvinhu zvinokwanisa kufanotaura mashandiro echipfungwa hazvisati zvatsanangurwa zvakajeka uye zvinoda kuti tsvakiridzo dziwedzerwe zvisati zvaitika.
Iwe unogona zvakare kufarira: AdHD makore makumi maviri mushure mekuongororwa. Izvo zvinokanganisa pamari yemari
Kufanana nezvidzidzo zvakawanda zverudzi urwu, tsvakiridzo iri mubvunzo ine chekuita neyakakodzera nzira dzakadai sehuwandu hushoma hwezvidzidzo zvakaongororwa, kuwanda kwevatori vechidiki vadiki - vanenge 59% vari pasi pemakore gumi - uye kudzoreredza dhizaini (inotsvaga pre-iripo dhata kubva kwairi kutora mhedziso, pane kutarisa izvo zvinga kuyerwa munguva chaiyo uye nekuzvienzanisa neboka rekutonga rakasungirirwa yeimwe hunhu).
Pasinei nezvose, uku kutsvagisa kunongedzera kune zvakakosha zvinhu zvine chekuita nechidiki chakaongororwa musoro, uye inopa yakakodzera mienzaniso yekuongororwa nezvidzidzo zvakakura.
Champigny, CM, Deotto, A., Westmacott, R., Dlamini, N., & Desrocher, M. (2020). Yedzidzo mugumo wevana ischemic sitiroko. Mwana Neuropsychology, 1-17.
Peterson, RK, Williams, TS, McDonald, KP, Dlamini, N., & Westmacott, R. (2019). Kuziva uye kudzidzira zvabuda zvinotevera zvehudiki cortical stroke. Chinyorwa cheuropi hwevana, 34(14), 897-906.
Kurohwa, kurohwa kwevacheche, kurohwa kwevana
Izvo zvinokanganisa zvecortical stroke muzera rekukura pane ruzivo rwekuziva uye kudzidza kwechikoro2020-08-112020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/ictus-infantile-corticale.png200px200px
"Kutamba" nemabasa makuru. Inochinja here nekunakidzwa?Zvinyorwa, Mabasa Ekutonga, Kubata Memory, Kudzoreredza, Kurapa